“နေ့စဉ်ပြောကြား အင်္ဂလိပ်စကား (၅)” - Myanmar Network
“နေ့စဉ်ပြောကြား အင်္ဂလိပ်စကား (၅)”
Posted by AungKoU (UMK) on April 26, 2013 at 22:26 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယခုတစ်ပတ်တွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို တစ်ခုခုလုပ်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကူညီရန်ဖြစ်စေ၊ အကူအညီ တောင်းရန်ဖြစ်စေ မိမိက စတင်ကမ်းလှမ်းသည့် စကားပြောပုံစံများ နှင့် တစ်စုံတစ်ယောက်က ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံခြင်း/ ငြင်းပယ်ခြင်း စသည့် စကားပြောပုံစံများကို ရေးသား မျှဝေ လိုက်ပါသည်။
“Making Offers (ကမ်းလှမ်းခြင်း)”
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တစ်ခုခု လုပ်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကူညီရန်ဖြစ်စေ၊ အကူအညီတောင်းသည့် အခါတွင်ဖြစ်စေ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ပြောဆိုရပါမည်။ ဖော်ပြပါ ဥပမာ ဝါကျများကို အခြေခံကာ လိုအပ်သလို သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Shall I …?
- Shall I get you some juice?
မင်းအတွက် ဖျော်ရည် ယူပေးရမလား
- Shall I open the window for you?
- Would you like another cup of tea?
- Would you likeaglass of water?
- Would you like me to clean the board?
သင်ပုန်းကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါလား
- How aboutajuice?
- How about some pizza?
အဆိုပါ ဝါကျများကို အသုံးပြုကာ ပြောဆိုရာတွင် ဖော်ပြပါ အချက်များကို သတိပြုသင့်ပါသည်။
Shall, can, will စသည့် Model Verb များကို အသုံးပြုပြီးပြောဆိုရာတွင် နောက်မှ ထပ်ထည့်သော ကြိယာကို to မလိုပဲ ရေးသားရပါမည်။ ဥပမာ -
“Shall I bring you the mobile phone?”
ကျွန်တော် ခင်းဗျားကို ဖုံးယူပေးရမလား
Shall သည် Can ထက် ပိုမို ယဉ်ကျေးသည်ကိုလည်း သတိပြုရပါမည်။
Would you like ကို အသုံးပြုလျှင် ၎င်းနောက်မှ နာမ်(noun) သို့မဟုတ် ကြိယာ (verb) ကို to ဖြည့်စွက်ကာ ရေးသားရပါမည်။ ဥပမာ -
လက်ဘက်ရည် သောက်ပါဦးလား ( Would you like နောက်က နာမ်(noun) ဖြစ်သည့် tea တိုက်ရိုက် လိုက်နိုင်သည်ကို သတိထားရပါမည်။)
“Would you like to drink some coffee?”
ကော်ဖီ သောက်ပါဦးလား (Would you like နောက်က ကြိယာ (verb) ဖြစ်သည့် drink သုံးလိုသည့် အတွက် to ဖြင့် ရေးရသည်ကို သတိထားရပါမည်။)
Responding to offers (ကမ်းလှမ်းချက်ကို ဖြေကြားခြင်း)
တစ်စုံတစ်ယောက်က မိမိကို ကမ်းလှမ်းလာသည့် အခါ ဖြေကြားရာတွင် လက်ခံခြင်း နှင့် ငြင်းဆိုခြင်း ဟူ၍ (၂) မျိုးကွဲပြားပါသည်။ ဥပမာ ပုံစံများကို ဆက်လက် လေ့လာကြည့်ပါ။
• "Can I help you?"
"No thanks, I'm just havingalook." (Withashop assistant.)
ရပါတယ်၊ ကျေးဇူးပဲ၊ ကျွန်တော် ကြည့်ရုံလေးပါ။ (ဆိုင်တွင် အရောင်းစာရေးနှင့် ပြောသည့် ပုံစံဖြစ်သည်)
"Do you know where the post office is?"
စာတိုက် ဘယ်နားမှာ ရှိလား သိပါသလား ခင်ဗျာ
• "Shall I help you with your maths problem?"
ခင်ဗျား သင်္ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲ ဖြစ်နေတာ ကျွန်တော် ကူညီပေးရမလား
"Yes, please. That would be very nice of you."
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီလိုဆို သိပ်ကောင်းတာပေါ့ဗျာ
• "Would you likeacup of tea?"
ရပါတယ်၊ မသေကာက်တော့ပါဘူး၊ ကျေးဇူးပဲ ( tanks တွင် ‘s’ ပါသည်ကို သတိထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ thank you ဟုပြောလျှင် ‘s’ မပါသည်ကို သတိပြုရပါမည်။)
• "Would you like another piece of cake?"
နောက်ထပ် ကိတ်မုန့် ထပ်စား ပါဦလား
"Yes please, that would be nice."
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော် နောက်တစ်ခု စားမယ်လေ
• "Would you like me to do the the ironing for you?"
ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် မီးပူတိုက်ပေး ရဦးမလား
ခင်ဗျား အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ပေါ့၊ ကိစ္စမရှိဘူး ဆိုရင်ပေါ့။
• "I'll do the washing, if you like."
ခင်ဗျားအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် အဝတ်တွေ လျှော်ပေးမယ်လေ
ရပါတယ်၊ ကျွန်တော့် ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
မစိုးရိမပါနဲ့၊ ကျွန်တော်ပဲ လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။
ကျေးဇူးပဲ၊ ဒီလိုဆို သိပ်ကို အဆင်ပြေတာပေါ့။
ဝါကျ အများစုသည် မြန်မာလို ဘာသာမပြန်ဘဲ နားလည်နိုင်သော်လည်း ယခုမှစတင် လေ့လာသူများ အတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် ဘာသာပြန်ကာ ရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော ဝါကျများသည် ဘာသာပြန်ရာတွင် အတန်ငယ် ထောက်နေပါသည်။ အများစုကို နားလည်နိုင်မည်ဟု ယူဆပါသည်။ ယခုရေးသားဖော်ပြထားသော ဝါကျများကို အခြေခံကာ လိုအပ်သလို ဆပွား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
“အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာသူတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး တိုးတက်ပါစေ …………………”
Permalink Reply by CHO CHO AYE on April 28, 2013 at 9:47
Permalink Reply by May Khine Htoon on April 28, 2013 at 16:16
Permalink Reply by eieikhin on April 28, 2013 at 17:52
Permalink Reply by Cindy on April 28, 2013 at 19:04
Let me share Sir, thanksalot for it.
Permalink Reply by AungKoU (UMK) on April 28, 2013 at 23:50
Permalink Reply by ohnmarswe on April 30, 2013 at 12:27
Permalink Reply by Byakparling on May 4, 2013 at 8:24
Permalink Reply by Myoe Min on May 7, 2013 at 15:41
I need lessons Link
“နေ့စဉ်ပြောကြား အင်္ဂလိပ်စကား (1)” to “နေ့စဉ်ပြောကြား အင်္ဂလိပ်စကား (4)”
Permalink Reply by AungKoU (UMK) on May 7, 2013 at 23:39
I will mail you these.
Permalink Reply by Ngreim Hsu Wai on May 17, 2013 at 14:46
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ အစ်ကို့သင်ခန်းစာကို ပြန်သုံးလို့ရမယ်ထင်တယ်နော် မြန်မာလိုပါလို့ ပိုအဆင်ပြေတာကို ဒီလိုပြောလို့ရတယ်နော်